Arsene Wenger Oo ka hadlay dhaawicii xalay soo gaaray Jack Wilshere. | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Arsene Wenger Oo ka hadlay dhaawicii xalay soo gaaray Jack Wilshere.
Arsene Wenger Oo ka hadlay dhaawicii xalay soo gaaray Jack Wilshere.
Kubad sameeyaha Arsenal Jack Wilshere ayaa xalay dhaawac looga saaray kulankii ay kooxdiisa la ciyaartay dhigeeda Chelsea kulan ka tirsan Carabao Cup lugtiisa hore, waxaana durba walaac laga muujiyay inta uu ka maqnaan doono garoomada.
Wiilka aan nasiibka laheyn wuxuu garoomada kula soo laabtay qaab ciyaareed cajiib ah, wuxuuna si wanaagsan u xasiliyay khadka dhexe kooxda Gunners, balse kaliya saacad ayuu nasiib u yeeshay inuu ka ciyaaro kulankii London Derby ee xalay.
Wilshere markii ugu horeysay ayaa loo dhiibay marada xushmadda kooxda, balse dhaawac ayaa kasoo gaaray canqawga taasoo keentay in ciyaarta laga saaro madama uu dareemay xanuun daran oo u diiday inuu ciyaarta sii wato.
Arsene Wenger oo tarabuunka ka fiirsanayay kulankiisii labaad madama uu ganaax kala kulmay FA-ga ayaa niyad wanaagsan ka muujiyay dhaawaca xidigiisa, sidoo kalana wuxuu nasiib darro ku tilmaamay iney waayaan xidig sidaas u wanaagsan.
Jamaahiirta Gunners ayaa durba noqday kuwa si weyn kaga naxay xaaladda Wilshere madama uu qaab cajiib leh kusoo rogaal celiyay.
“Waxaa jirta murgacasho dhanka canqawga ah, ilqabadka hore uma muuqan mid aad u xun, balse dabcan axadda waxaan maleynayaa inuu soo yaraan doono”
“Ma garan karo inta uu maqnaan doono, waa ceeb inaan lumino isaga xilli uu qaab wacan ku jiray, waxey dhibaato kasoo gaartay darbo kaga dhacday canqawga”
Ugu dambeyntii Wenger wuxuu qiray inuu fiican yahay Jack Wiilshere isla markaana uusan ku fakareynin inuu kulamo badan maqnaan doono.